नि: शुल्क Photoshop Express Online
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > Photoshop Express अनलाइन
यो सम्पादक एडोब Photoshop Express का नि: शुल्क विकल्प हो जसले तपाईंलाई सबै आवश्यक फोटो हेरफेर अनलाइन प्रदर्शन गर्न मद्दत गर्दछ। सम्पादकले RAW समर्थन, प्लग-इनहरू र समायोज्य तहहरू प्रदान गर्दछ। तपाईं विभिन्न लेआउटहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र कस्टम ब्रशेसको साथ तान्न पनि सक्नुहुनेछ। एडोब फोटोशप एक्सप्रेस अनलाइन डाउनलोड गर्नु अघि यो सम्पादक प्रयास गर्नुहोस्।
यो फोटोशप एक्सप्रेस को पूर्ण संस्करण अनलाइन हो?
होईन, सम्पादक पूर्ण फोटोशप एक्सप्रेस अनलाइन संस्करण होईन। यो शुरुआतीहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो र साधारण फाराममा जटिल विधिहरू प्रस्तुत गर्दछ।
लगभग सबै तस्विर सम्पादन प्रविधिहरू रातो आँखा हटाउने, दाँतको सेतो पार्ने, एक्ने इलिमिनेसन र रंग सुधार, अर्ध-स्वचालित मोडमा गरिन्छ, तहहरूको प्रयोग गरेर गहन समायोजन गर्ने क्षमताको साथ।
यो अनलाईन फोटोशप एक्सप्रेस क्यामेरा RAW प्लगइन छ?
होईन, यो फोटोशप एक्सप्रेस अनलाइन संस्करणले एडोबको क्यामेरा RAW प्लगइन प्रस्ताव गर्दैन। तर तपाइँ अझै छवि र समायोजन सेक्सन मा फिल्टर, घटता र अन्य र settings सेटिंग्स को उपयोग गरेर र color्ग सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
के म यहाँ आयात गर्न र प्लगइन प्रयोग गर्न सक्छु?
हो, यस सम्पादकले फोटोशप एक्सप्रेस प्लगइनहरू समर्थन गर्दछ, नि: शुल्क Photoshop Actions, नि: शुल्क Photoshop Overlays, नि: शुल्क Photoshop Brushes र नि: शुल्क फोटोशप Photoshop Textures।
त्यहाँ उच्च-स्तरीय रीचिंगका लागि पर्याप्त उपकरणहरू छन्?
तपाईं छालालाई सुचारु गर्न सक्नुहुन्छ, रातो-आँखा दोष हटाउन सक्नुहुन्छ, सेतो दाँतहरू, पृष्ठभूमि हटाउन सक्नुहुन्छ र स्प्रे कपालहरू पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईं प्रिन्टिंगका लागि उच्च गुणको फोटो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो फोटोशप एक्सप्रेस अनलाइन विकल्पको कार्यक्षमता पर्याप्त हुँदैन। यस मामिलामा, हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं पेशेवर तस्विर पुनःप्राप्ति सेवामा सम्पर्क गर्न।
Photoshop Express Online - भिडियो ट्रिक्स